Buraannews.com » Maamulka Tiyaatarka oo si kulul uga hadlay Hay’ado gaar ah oo dhisaya Tiyaatarka Qaranka Somaliyeed Home Warar
Maamulka Tiyaatarka oo si kulul uga hadlay Hay’ado gaar ah oo dhisaya Tiyaatarka Qaranka Somaliyeed
December 7, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 İyadoo dhisme dib loogu dayactirayo Golaha murtida iyo madadaalada Qaranka (National Theatre Somalia) ayaa hadana waxaa soo baxaya dhaliil ku aadan qaabka loo dayactirayo.
Maareeyaha National Theatre Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf oo isagu hore xilkaasi ugu magacaabay Madaxweynihii Dkmg ahayd Shariif Shiikh Axmed ayaa si kulul uga hadlay qandaraas ay qaateen shirkado iyo hay’ado ajnabi ah.
Abwaanka ayaa waxa uu sheegay in hay’adahaasi aysan soo marin shuruucdii loo baahnaa islamarkaana ay doonayaan dhaqaale inay ku helaan nuuriyad iyo dhagaxaan yar oo golaha maalmo kooban lagu dhebsaaso.
“Waxaan sheegayaa in hay’adaha howsha iminka ku jira ay yihiin kuwo dano gaar ah wata,dalka shiinaha ayaa hore udhisay iminkana maxaa loola xiriiri waayey si ay udhisaan tiyaatarka ayuu yiri Abwaan Cabdi dhuux”.
Maareeyaha Golaha Murtida iyo madadaaalada National Theatre Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf ayaa madaxda dalka Somaliya ka codsaday gaar ahaan wasaarada Warfaafinta inay dib u’eegis kusameyso qaabka wax usocdaan.
Tan iyo markii 4-Apriil 2012 sanadkaan uu qarax ismiidaamin ka dhacay national Tiyaatar islamarkaana dad badan ay ku naf waayeen waxaa la iska ilaaway wax uqabashadiisa hayeeshee labo bilood waxaa ka socday dayactir.